» कस्तो होला आजको दिन ? यस्तो छ आजको राशीफल
कस्तो होला आजको दिन ? यस्तो छ आजको राशीफल
१९ असार २०७७, शुक्रबार ०६:०६
आज २०७७ असार १९ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ रु भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ रु ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ –
पारिवारिक वातावरण तपाईंको अनुकूल नभए पनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने धन आर्जन हुनेछ। बेसुरमा दिइएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ। शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ । चिताएको काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको लगानीले मनग्गे धनलाभ हुनेछ। आलस्य त्यागेर मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ। प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका हात फैलाउनेछन्। नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। खबरहब डटकमबाट
व्यवसायीहरूले गरे मासुको मुल्य निर्धारण
रोकिएको कोरिया जाने प्रक्रिया सुरु हुँदै : रोस्टरको अवधि ६ महिना थपिने
कोरोनाभाइरस रोकथामको एउटा अचूक अस्त्र: मास्कको अनिवार्य प्रयोग
विपद्का घटनामा परी ६ महिनामा ४६३ जनाको मृत्यु
आईपीएलमा पञ्जाबको दोस्रो जित, बेङ्‍गलोर ८ विकेटले पराजित
पानीको विषयमा विवाद हुँदा घरबेटीबाट मारिए डेरावाल
लागुऔषध गाँजासहित २ जना प्रहरीको फन्दामा